MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: Myanmar-Thabin-Ah-Hla-Sin-Thumyar And Pakokku Flood Victims
Myanmar-Thabin-Ah-Hla-Sin-Thumyar And Pakokku Flood Victims
"မြန်မာ့သဘင် အလှဆင်သူများ" လည်း ပခုက္ကူရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူခံထွက်
မန္တလေးမှ ဇာတ်မင်းသားလေးများ ပေါင်းစည်းတည်ထောင်ထားသော "မြန်မာ့သဘင် အလှဆင်သူများ" အဖွဲ့သည်
"ပခုက္ကူရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပရိသတ်များနှင့် ကျွန်တော်တို့ သူစိမ်းတွေလိုမနေဘဲ ကူညီကြပါစို့။ ကသောလက်ဖြင့် လှူကြမည်"
စာတမ်းများချိတ်ဆွဲထားသော ကုန်တင်ကားကြီးဖြင့် မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင် ၂၀၁၁၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ (၃) ရက်တာမျှ နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၈ နာရီတိုင်တိုင် သီဆိုဖျော်ဖြေ အလှူခံထွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါ၏။
(မန္တလေး မြို့မ တူရိယာအသင်းကြီးကလည်း ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းက ယခုကဲ့သို့ပင် မန္တလေးမြို့တွင်း လှည့်လည်သီဆိုတီးခတ်ဖျော်ဖြေကာ ပခုက္ကူရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူခံထွက်ခဲ့ပါသည်။
Facebook ပေါ်က Myo Ma
Posted by Nyo Gyi at 23.11.11
I would like to invite you all to come and listen Myanmar Music Online. I havealot Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.
Myanmar-Thabin-Ah-Hla-Sin-Thumyar And Pakokku Floo...
Stop the Civil War! We Want Peace!